Voankazo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Lychee: votoatin'ny kaloria, fanangonana, tombony ary fahasimbana
Ny voankazo miavaka dia mihamitombo hatrany eo amin'ny fiainantsika. Raha teo aloha dia afa-po tamin'ny voankazo voarara ("cocktail tropika", "pineapple ao amin'ny sira", sns), amin'izao fotoana izao any amin'ny toeram-pivarotana lehibe dia afaka mividy voankazo vaovao avy amin'ny faran'ny tany hafa. Ny mason'olona miseho - mipoitra amin'ny fomban-tsakafo tropika miaraka amin'ny loko maro, aroma, endrika samihafa.
Ahoana no hanamainana ny felam-boly ao an-trano mba hitehirizana ireo toetra ilaina
Ny prunes dia malaza amin'ny sakafo sy ny fahasalamana. Na izany aza, rehefa mividy voankazo maina, dia tsy misy azo antoka fa tsy misy fikajiana, pestiside ary zavatra simika hafa, ary tsy mora. Amin'ny vanim-potoana, ny vidin'ny fofona vaovao dia tsy lehibe loatra, ka ho fantarintsika ny fomba hisafidianana ny làlan-dry maina ary ny fomba fitehirizana tsimokaretina tsara ao an-trano.
Banana: ohatrinona ny kaloria, inona no raketina, inona no tsara, izay tsy mahazo mihinana
Banana dia azo jerena ao anaty talantalana mandritry ny taona, raha tsy mendrika, matsiro sy salama. Tsy ampiasaina amin'ny sakafo kely fotsiny izy io ary ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo, fa koa amin'ny tanjona kosmetika, izay fantatry ny olona vitsivitsy. Andao hijery akaiky ny vokatra. Kalorie sy ny vidin'ny sakafo Aty anaty atleta dia heverina ho vongan-dranomandry feno ny ombivavy, ary noho ny fiakaran'ny vidin'ny sakafo.
Kiwi: mahasoa na mampidi-doza? Fampiharana sy fiantraikany amin'ny vatana
Kiwi - iray amin'ireo vokatra tena mahasoa indrindra, izay tonga nanandrana maro. Manana tombam-bidy avo lenta izy, ary ny tsirony tsy mahazatra sy ny fahagagana dia nahita fampiharana be dia be tao amin'ny sangan'asa kulinarina. Na izany aza, ny tombontsoa lehibe amin'ny kiwi dia toetra mahasoa, izay hazavaintsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Inona no salak, ny tombotsoany sy ny fomba ampiasana izany
Ireo izay tsara vintana hitsidika an'i Thailandy farafaharatsiny dia mahafantatra fa misy karazany maro samihafa amin'ireo vokatra mahavariana indrindra atolotr'ity firenena ity amin'ny mponina ao aminy. Inona avy ireo anarana mahagaga toy ny durian, jackfruit, dragon fruit, maprao, shompu, guava, lychee, longan, mangosteen, noi-na, rambutan, santol, sapodilla na tamarind!
Karazan'olona iray - "hazo amin'ny endriky ny bonsai": fambolena sy fiarovana sarimihetsika
Ahoana no handrefesana ny hafanan'ny vatan'ny bitro sy ny fitsipika arahin'izy ireo?
Hazo tsy ara-dalàna sy mahavokatra be indrindra
Ny endriky ny fambolena amam-borona: ahoana no hanomezana azy ireo fikarakarana be
Ny gineostemma dimy mipoitra: mahasoa sy mitombo ao an-trano
Diniho ny fomba fandoam-bolo: inona no tena mahomby indrindra, endri-javatra amin'ny fampiharana, ny fiheverany sy ny tsy fitoviany
Afaka mitroka bitinambur
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Voankazo